Isku ekaa Labadan Dhacdo! | KEYDMEDIA ONLINE
Isku ekaa Labadan Dhacdo!
Dhacdo dhacday horaantii 1970-kii ilaa 80-kii iyo midda haatan ka taagan Hirshabeelle sanadkaan 2020 waa labo dhacdooyin oo isku eg, waa faallo gaaban oo uu tifaftiraha Keydmedia Online ka diyaariyay qaska maanta ka jira Hirshabeelle.
Horaantii 1970-kii ilaa 80-kii intii u dhaxeysa waxaa magaalada Jowhar booqday Keligii-taliye Maxamed Siyaad Bare AUN, waxaa wafdigiisa kamid ahaa siyaasi sheekooyin badan laga qoray oo lagu magacaabo Faarax Maxamed Cali (Farah Gololey) AUN.
Barre waxa uu guddoomiye gobol u waday Nin ay Bare isku beel yihiin, Faaraxna horay ayuu u watay isagoo is leh Faarax wax baa laga maqlaa xaaladda ha dejiyo, balse Faarax raacidda uu racay isna qorsho kale ayuu watay, markii la tagay magaalda Jowhar ayaa Faarax waxa uu ku yiri “Madaxweyne aniga ayaad ii marti qaadan tahay” odaygiina wuu aqbalay.
Waxa uu Faarax ku marti qaaday Madaxweyne Barre Soor lagu iidaamay caano lo’ oo dhaay ah, sida caadada ah soorta gacan ayaa lagu cunaa, marka ay soo faraxasheeyn ayuu yiri “Sug mudane walaxaa dhimane” markaas ayuu soo qaatay xabad liin dhanaan ah waxa uu ku miiray weelkii ay ku jireen soortii iyo caanihii.
Maxaa laga filan karaa caano dhaay ah oo lagu daray liin, waa go’een, waxa uu yiri odaygii “War Faarax maxaa ula jeedaa?” Markaasuu yiri “Cun hee!” markaana wax la cuni karo maahan soor lagu daray caano Go'ay/Baqay. inta uu ku soo jeestay ayuu yiri “Ninka meesha aad keentay waa sidaan oo kale dadka degaanka maad isku deysid hee”.
Hada reer Hirshabeelle ma laga waaya nin yiraahda Farmaajoow reer Hirshabeelle ka dhax bax oo isku daa iyagaa dantooda yaqaan oo xal gaaraya, raga ka soo jeeda deegaanka ha is wareystaan, xalna ha gaaraan oo yaan la iska hor keenin reer jowhar iyo reer Baladweyne, waa su'aasha ay isweydiineyso Keydmedia Online.
Madaxweyne Farmaajo ninka uu wato waa ninkii kusoo celin lahaa kursiga Villa Soomaaliya, waa sida uuu aaminsan yahaye, Siyaad Bare isna wuxuu dabada ku watay ninkii uu isaga dhigi lahaa balaayada gobolkaas ka imaan doonta gaashaanna u noqon lahaa, waa laba dhacdo oo isku eg, waa laba nin oo danley ah, oo dantii umadda intey hilmaameen tooda gaarka u ah xoogga saaray.
Hirshabeelle ma'ahan guri qaad weyn oo la isku qarin karo, mana ahan meel nin kaliya aragtidiisa wax looga baddali karo.